Naannoo Uummattoota Kibbaa Godina Koonsootti, jiraattonni nagaa ajjeefamuufi qe’eerraa | Kichuu
Naannoo Uummattoota Kibbaa Godina Koonsootti, jiraattonni nagaa ajjeefamuufi qe’eerraa buqqaafamuun hammaachaa dhufuudhaan hanga ammaatti maatiin kuma sagaltamii afur (94, 000) qe’eerraa buqqa’uun ibsame.
Itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Godina Koonsoo kan ta’e Obbo Hasan Waleeloo akka jedhanitti, lolli kun kan eegale ji’a shan (5) oliif kan ture yoo ta’u, qaamota eenyummaansaanii hin beekamneen hanga ammaatti namoonni 70 ol kan ajjeefaman yoo ta’u, jarreen ajjeefaman keessatti qaamoleen nageenyaa Federaalaa, Nageenyaa naannoo fi Godinichaa kan keessatti argamanidha.
Akka Itti gaafamaan waajjira Qonnaafi qabeenya uumamaa Godinichaa obbo Kabbadee Kaasusaa Addis standardiif himanitti ammoo, sababa lola kanaatiin maatiin kuma 94,586 qe’eesaaniirraa buqqa’aniiru. Manni 1000 ol ammoo, aanaawwan Ariibaa Geelalaa, Kalanigoo, Gaarichafi Fuchichaa jedhaman keessatti gubataniiru.
Gabaasni kan Addis Standard